Nampandre ny Filan-kevi-pitantanana fa Hafindra ny Foibe | Diary 2014
Faly ny fianakavian’ny Betelan’i Etazonia, tamin’ny zoma 5 Jolay 2013, rehefa nilaza an’izao i Anthony Morris, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana: “Vita omaly alakamisy 4 Jolay 2013 ny fifanarahana momba ny fivarotana an’ireo tranobe enina, anisan’izany ilay eo amin’ny 117 Adams Street sy 90 Sands Street eto Brooklyn. Tsy maintsy miala amin’ireo Tranobe Voalohany ka hatramin’ny Faha-5 isika, alohan’ny tapatapaky ny Aogositra izao.”
Nilaza ny Rahalahy Morris fa mbola hampiasain’ny Sampan-draharahan’ny Fanasan-damba ny rihana fahadimy sy fahenina amin’ilay Tranobe Fahatelo, hatramin’ ny tapatapaky ny 2014. “Mandritra ny 2017 angamba isika”, hoy izy “no hiala ao amin’ilay tranobe eo amin’ny 90 Sands Street.”
Namidintsika ireo tranobe enina ireo, satria tsy hatao ao Brooklyn intsony ny foibentsika, fa hafindra any amin’ilay tany 102 hektara any Warwick, New York. Tsy azo atomboka anefa ny fanomanana sy ny hady fototra ao amin’io toerana io, raha tsy azo ny fahazoan-dalana.
Nanongilan-tsofina ny fianakavian’ny Betelan’i Etazonia, tamin’ny alakamisy 18 Jolay, rehefa namaky an’ity fampandrenesana ity i Mark Sanderson, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana: “Faly izahay milaza aminareo fa nanaiky ny mari-tranon’ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah daholo ny tompon’andraikitry ny fanajariana ny tanànan’i Warwick, tamin’ny alarobia 17 Jolay hariva. Azo atao amin’izay izao ny mangataka fahazoan-dalana hanao fanorenana. Mahagaga fa efa-taona katroka taorian’ny nahazoantsika an’ilay tany ao Warwick izany no nitranga. Hita hoe nitahy antsika i Jehovah, rehefa dinihina ireo zava-nitranga tato ho ato.” Nisaotra ny rehetra ny Rahalahy Sanderson, noho izy ireo nazoto niasa sy tsy nitsahatra nitrotro am-bavaka an’io tetikasa lehibe io. Hoy ihany izy: “Midera sy misaotra an’i Jehovah isika, satria vita soa aman-tsara iny dingana lehibe iny, mba hahafahana mamindra ny foibe any Warwick.”
Misy toerana fanatobiana ny zavatra ilaina amin’ny fanorenana ao Tuxedo, any New York, tsy lavitra an’i Warwick. Nivory tao amin’ny efitra fisakafoana tao amin’izy io ny Rahalahy Morris sy ny mpiasa an-tsitrapo 1 000 teo ho eo, ny zoma 26 Jolay. Avy ao amin’ny Betela sy anisan’ny Komitim-paritra Momba ny Fanorenana (KMF) izy ireo. Niresaka hevitra mampahery avy ao amin’ny Baiboly aloha ny Rahalahy Morris. Hoy izy avy eo: “Misy zavatra vao voaraiko ity an-tanako ity, ka mba tiako horesahina aminareo. Eto an-tampony eto misy soratra hoe ‘Fahazoan-dalana Hanorina.’ ” Tonga dia nirefotra ny tehaka. Faly ny rehetra rehefa namaky ampahany tamin’izy io ny Rahalahy Morris. Vao adiny telo talohan’io ny Ben’ny tanànan’i Warwick no nanome azy io.
Inona no atao any Wallkill sy Warwick ary Tuxedo?
Nanomboka tamin’ny Aogositra 2009 ny asa fanitarana tany Wallkill. Mpiasa an-tsitrapo tsy maharitra 2 800 teo ho eo no efa niasa tany. Anisan’ny atao any ny fanorenana trano fonenana vaovao, parking, ary trano misy ireo birao. Nohavaozina koa ny trano fonenana iray, ny trano fanaovana pirinty, ny fanasan-damba, ilay efitra fivoriana ngezabe, ny trano misy an’ireo sampan’asa samihafa, ary ny efitra fandraisana olona. Mbola hitohy hatramin’ny faran’ny 2015 ny fanitarana an’i Wallkill.
Efa nanomboka koa ny fanorenana ao amin’ilay toerana vaovao hisy ny foibe any Warwick. Ireto no efa natao nandritra ireo volana vitsivitsy nanombohan’ny asa: Fanarenana ny tany, hady fototra, ary fametrahana an’ireo zavatra mila atao any ambanin’ny tany, toy ny kabla sy ny fantsona. Nanomboka tamin’ny faramparan’ny 2013 ny fanorenana ny tranobe telo voalohany, dia ny trano fikojakojana fiara, parking ho an’ny mpitsidika, ary trano fikojakojana zavatra hafa. Tena ilaina mandritra ny fanorenana na aorian’izay ireo tranobe ireo, mba hikarakarana ny mpiasa sy ny fitaovana. Amin’ny 2014 no kasaina hatomboka ny fanorenana ny trano fonenana sy ny trano misy ireo birao.
Mirefy 20 hektara ny velaran’ny trano rehetra ao Tuxedo, ary folo kilaometatra any avaratr’i Warwick no misy azy io. Any no “fametrahana ny zavatra ilaina amin’ny fanorenana an’ilay foibe vaovao”, hoy i Kenneth Chernish, anisan’ny Komitin’ny Fanorenana. “Io toerana io”, hoy izy, “no mamatsy sakafo sy fitaovana ho an’ny mpiasa an-tsitrapo. Mitoby any koa ny sasany amin’ireo mpiasa ireo.” Nanampy be ny KMF sasany avy any amin’ny faritra atsinanan’i Etazonia mba ho vita haingana ireo trano ao Tuxedo.
Maro amin’ireo mpiasa an-tsitrapo miara-miasa amin’ny KMF eran’i Etazonia no te handray anjara amin’io fanorenana ny foibe io. Efa betsaka ny rahalahy sy anabavy manao asa an-tsitrapo tsy maharitra any amin’ilay toeram-panorenana, ary tena ampy fahaizana izy ireo. I Leslie Blondeau, ohatra, miara-miasa amin’i Peter vadiny ao amin’ny Sampan-draharahan’ny Fanamboarana Fantson-drano. Hoy izy: “Lasa mifankatia kokoa izahay rehefa miara-miasa, sady manana fotoana mamy tsy hohadinoinay mihitsy.”
Hoy i Mallory Rushmore: “Miara-miasa amin’ireo rahalahy mikarakara ny jiro aho eto Tuxedo. Mahafinaritra be foana isan’andro, mahita hoe miara-miasa tsara daholo ny olona eto, izany hoe ny mpiasa an-tsitrapo rehetra.”
Hoy i Quincy Dotson: “Tombontsoa be ny miasa etỳ. Nieritreritra aho hoe betsaka ny zavatra hafoiko, kanefa raha ny marina, nahazo betsaka lavitra aho.”
Hoy indray ny Rahalahy Chernish: “Mahafinaritra ny mandray anjara amin’ity tetikasa ity. Haingam-piasa ireo rahalahy sy anabavy, sady mahavita zavatra tsara. Tena tian-dry zareo koa ny manao an’ilay izy.”
Hizara Hizara Mandroso Foana ny Fandaminana
Hizara Hizara Diarin’ny Vavolombelon’i Jehovah 2014